China ICE Rafitra fanamafisana fasika avo lenta ho an'ny mpamokatra sy mpamatsy rano amin'ny rano mangatsiaka | Yubing
Sivana fasika mahomby be
Ny fivoaran'ny sivana fasika avo lenta dia nanova ny filtana amin'ny rano mangatsiaka. Ny solida mihantona izao dia azo esorina tsara amin'ny 1/2 micron miaraka amin'ny sivana fanasana mandeha ho azy. Ny sivana haino aman-jery teknolojia antitra dia tsy midina afa-tsy amin'ny 10 microns. Satria ny ankamaroan'ny sombin-drano mangatsiaka dia ao anatin'ny haben'ny 1/2 ka hatramin'ny 5 micron, ny sivana avo lenta dia tsara kokoa amin'ny fanesorana ireo loto manelingelina ireo. Ny filtration mahomby kokoa dia midika hoe nohatsaraina ny valiny amin'ny sivana kely kokoa. Ny sivana avo lenta amin'ny ICE dia mampiasa fasika ultrafine hanomezana ity filtration ity izay mahomby kokoa. Ny hetsiky ny rano miampita amin'ny rano manerana ny haino aman-jery tsara kokoa dia manakana ny fametahana haingana amin'ny alàlan'ny fanolorana ireo loto ho any amin'ny faritra fitahirizana. Tsy ny efficences filtration ihany no mihatsara, fa ny sivana kosa dia mitaky rano averina 10 heny kely noho izany.
Filtration mahomby amin'ny vidiny
Ny sivana avo lenta an'ny ICE dia mahomby kokoa amin'ny fanesorana ireo sombin-javatra tena tsara izay manala ny tilikambo fikosehana amin'ny rivotra. Io fahombiazana tena nohatsaraina io dia mamela ireo sivana ireo ho 4 ka hatramin'ny 5 heny kely noho ny sivana multimedia rehefa manome rano madio kokoa. Ny sivana multimédia 5-ka hatramin'ny 10% an'ny tahan'ny famerenam-bidy, raha 1 ka hatramin'ny 3% ihany ny sivana avo lenta. Aza mandany vola amin'ny sivana lehibe tsy mahomby amin'ny fampiasana teknolojia taloha.
Tombontsoa azo avy amin'ny rano voasivana madio
•Ny sehatry ny famindrana hafanana madio kokoa dia ahafahan'ny fitaovana miasa mahomby kokoa amin'ny fihenan'ny vidin'ny angovo.
•Mitatra ny ain'ny fitaovana noho ny fihenan'ny tahan'ny harafesina.
•Ny fahombiazan'ny fitsaboana mikraoba dia mihatsara ka miteraka toeram-piasana salama kokoa.
•Mihena ny fikojakojana ny fitaovana sy ny fihenan'ny fotoana tsy voalamina noho ny sump, ny famenoana ary ny fifanakalozana hafanana.
Manaraka: ICE Industrial Reverse Osmosis System ho an'ny Cooling Tower Water System
fanasivanana rano tilikambo mangatsiaka
rafitra fanivanana rano tilikambo mihena
fanasivanana ny rano mikoriana tilikambo mangatsiaka
rafitra filtration indostrialy
rafitra filtration fasika indostrialy
filtration fasika ho an'ny tilikambo mangatsiaka
rafitra fanivanana fasika